Ity fanandramana ity dia mampiakatra ny fahafahan'ny solosaina 100.000 XNUMX heny hainganana haingana kokoa | Vaovao momba ny gadget
Ity fanandramana ity dia mampiakatra ny fahafahan'ny solosaina 100.000 XNUMX heny haingana kokoa
Amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa dia mila ny solo-saintsika isaky ny taranaka lasa isika haingana kokoa ary mampitombo ny fahaizanaoMisaotra indrindra an'ity fandrosoana amin'ny computing ity, vitantsika ny nahatratra an'izao andro izao mankafy ity haavo teknolojia manaitra ity.
Mampalahelo fa androany, manaraka ny lalana alehantsika, dia tonga amin'ny teboka iray izay efa lazain'ny fizika amintsika fa tsy azo atao ara-bakiteny, ohatra, ny fananganana mpikirakira mahomby kokoa na dia ankoatry ny fitahirizana data aza dia manana tavoahangy lehibe tokoa ny solosaina ny hafainganam-pandehan'ireo famantarana azo ampitaina.
Ity fikarohana ity dia afaka adika amin'ny solosaina hatramin'ny 100.000 XNUMX heny haingana noho ny ankehitriny.
Izany indrindra no teboka niandohan'ny vondrona mpikaroka iray University of Michigan Inona no zava-bitany?Mandefasa fambara amin'ny filaharan'ny femtoseconds, fandrosoana iray izay mety hanova ny tontolon'ny informatika araka ny ahalalantsika azy. Mba hanomezana hevitra anao, ny femtosecond dia ny fotoana ampitovina amin'ny iray lavitrisa segondra, izany hoe, ao anatin'ny iray segondra dia misy femtoseconds arivo arivo tapitrisa. Betsaka no mifanaraka amin'ny iray segondra, toy ny segondra afaka 100 tapitrisa taona ary 100 segondra tafiditra ao anatin'ny 3.153.600.000.000.000 tapitrisa taona.
Mba hanaovana io fanandramana io dia nampiasa ny mpahay siansa kristaly gallium selenide ho semiconductor, fitaovana iray izay nahafahan'izy ireo nanao pulses laser nandritra ny fe-potoana femtoseconds vitsivitsy monja, rehefa nisy fiantraikany tamin'izy ireo, ny elektrôna dia niampita avy amin'ny haavon'ny angovo hafa ka hatramin'ny iray hafa, izay nahatonga ny famoahana pulses bebe kokoa aza. Ireo pulsa ireo indrindra no azo ampiasaina hamakiana sy hanoratana vaovao amin'ny alàlan'ny elektrôna. Mba hifehezana ireo fivezivezan'ny fampahalalana rehetra dia ilaina fotsiny ny manova ny firindran'ny kristaly.
More Information: University of Michigan
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Ity fanandramana ity dia mampiakatra ny fahafahan'ny solosaina 100.000 XNUMX heny haingana kokoa
Ny BlakBerry KEYone dia azo tehirizina any Eropa ankehitriny
Mihemotra ny WhatsApp ary hamela ireo mpampiasa hametraka lahatsoratra